Khadka Cagaaran | BGA
Khadka Cagaaran ee BGA
BGA, waxaan si dhab ah u qaadnaa Green. Ardeydu waxay sahmiyaan joogtooyinka joogtada ah ee "Green" istaaga manhajka dhankooda u qalin jebinta, iyagoo uga qaybqaadanaya himiladeenna qaabab kala duwan.
Halkan waxaa ah khariidad loogu talagalay shaqadan.
Kow iyo tobnaad
Laba iyo tobnaad
Boos celinta Hale
Xarunta Dabeecada Boston
Maalinta Apple ee Adeegga Green
Xarunta Dabeecada Boston:
Cilmiga Beeraha Magaalada
Bandhigyada Manhajka Isweydaarsiga Cagaaran
Dib u eegista Junior
Tacliinta Farsamada ee Shaqada CTE (CTE) waxay siisaa ardayda da 'kasta oo ay leeyihiin xirfadaha tacliinta iyo farsamada, aqoonta iyo tababarka lagama maarmaanka u ah inay ku guuleystaan ​​shaqooyinka mustaqbalka iyo inay noqdaan bartayaasha cimriga oo dhan. BGA waxaa la siiyay shahaadada CTE ee Sayniska Deegaanka.
Maalinta Adeegga Ardayda waxay kaqeybqaataan adeegga bulshada dhammaan shaqooyinka BGA. Taageerida ururada aan faa'ido doonka ahayn ee bulshada ayaa ardayda siisa qodobo badan oo ah gelitaanka ururada adeega iyo dariiqooyinka mihnadeed ee ku habboon danahooda.
Toddobaadka Mashruuca Toddobaadka Mashruuca (toddobaadyo kala duwan oo loogu talagalay ardayda HS iyo MS) waxay ardayda ka saaraan dhismaha si ay u sahamiyaan khibradaha, fursadaha mashruuca iyo fursadaha shaqada ku saleysan iyaga oo u soo bandhigaya fursado waxbarasho iyo habab kala duwan iyada oo lagu taageerayo horumarka iyo wax-ku-oolnimada sawirka. Xirfadaha qarniga 21aad.
Bandhigyada Waxqabadka-Isugeynta-Manhajka Ardayda fasallada 9 illaa 12 waxaa dhammaantood laga rabaa inay ka shaqeeyaan mashruucyada ka gudbaya aagagga ay ka kooban yihiin oo ay ku soo ururiyaan cilmi-baaristooda bandhiga manhajka. Ardaydu waxay ku raaxeystaan ​​cilmibaaristooda, qoristooda, iyo xirfadaha ku hadalka bulshada maxaa yeelay dhamaantood waa qeybaha ugu muhiimsan ee soo bandhigida guuleysta.
Internships Muddada afaraad ee muddada-dheer waxay dhammaantood shaqadooda dugsiga ku beddelayaan tababarro shaqo, waxay bartaan xirfado shaqo-ku-qiimeyn leh leh, hubinta xulasho xirfadeed oo suurtagal ah, iyo helitaanka xirfado jilicsan oo jilicsan sida maaraynta waqtiga, xallinta khilaafaadka, iskaashiga, iyo mas'uuliyadda.